Elite Express - Rainy Season Promotion (မိုးရာသီ Promotion)
-Select-Bagan (ပုဂံ)Hopone (ဟိုပုန်း)Magwe (မကွေး)Mandalay (မန္တလေး)Mawlamying (မော်လမြိုင်)Minbu (မင်းဘူး)Monywa (မုံရွာ)MRTV(TK) မြန်မာ့အသံ(တပ်ကုန်း)Mudon (မုဒုံ)Naung Cho (နောင်ချို)Naypyitaw(BawGa) (နေပြည်တော်_ဘောဂ)Naypyitaw(Myoma) (​နေပြည်​​တော်​_မြို့မ)Nyaung Shwe (​ညောင်​​ရွှေ)Pakhuokku (ပခုက္ကူ)Pyinoolwin (ပြင်ဦးလွင်)TatKone (တပ်ကုန်း)Taunggyi (တောင်ကြီး)ThanPhyuZayat (သံဖြူဇရပ်)Yangon (ရန်ကုန်)
NRIC Passport Other Search By
-Select- 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 / -Select- ကက ကကက ကကထ ကကန ကကန ကကန ကကရ ကခက ကခန ကခန ကစန ကဆန ကတခ ကတတ ကတန ကတန ကတန ကထန ကနန ကပက ကပတ ကပန ကပလ ကဖန ကဘလ ကမတ ကမန ကမန ကမန ကမရ ကမရ ကလထ ကလန ကလန ကလန ကလန ကလန ကလ၀ ကသန ကသန ကသန ကအဆ က၀န ခဆန ခတန ခန ခဗန ခမစ ခရန ခလဖ ခသစ ခအဇ ခဥတ ခဥန ခဥန ခဥန ဂခဂ ဂဂန ဂန ငဇန ငပတ ငဖန ငသရ စကတ စကန စကန စခန စတန စတရ စဒန စလန ဆကခ ဆကန ဆဆန ဆဒဂ ဆပဘ ဆပ၀ ဆဖန ဆမန ဆလက ဇက ဇကန ဇလန ညတန ညရန ညလပ ညဥန တကန တကန တကန တကန တခလ တငန တဆန တဇန တတက တတန တတန တတဥ တနန တမန တမန တယန တသန တသရ ထခန ထတပ ထတပ ထတလ ထလန ထလန ထ၀န ဒဂတ ဒဂန ဒဂမ ဒဂရ ဒဒရ ဒပန ဒပယ ဒမဆ ဒလန ဒဥန ဓနဖ နခန နခန နစန နဆန နတလ နထက နပန နမတ နမန နမန နယန ပကတ ပခက ပခတ ပခန ပဇတ ပဏက ပတတ ပတန ပတန ပတန ပတယ ပတအ ပန ပဖန ပဗသ ပဘတ ပဘန ပမန ပမန ပမန ပလန ပလန ပလန ပလဘ ပလ၀ ပသက ပသန ပသရ ပဥလ ပ၀န ဖကန ဖခန ဖပန ဖပန ဖပန ဖမန ဖလန ဗတထ ဗမန ဗမန ဗဟန ဘကလ ဘတလ ဘပန ဘလခ ဘလန ဘသတ ဘအန မကတ မကန မကန မကန မကန မကန မကန မခန မခန မခန မခဘ မဂတ မဂဒ မစန မစန မဆတ မဆန မဆန မညန မညန မတန မတန မတန မတန မတန မတပ မတမ မတရ မထလ မဒန မန မနတ မနမ မပန မပန မပန မပန မဖန မဘန မဘန မဘန မမတ မမတ မမန မမန မမန မမန မမန မမန မမန မမန မမန မယန မရက မရတ မရန မရန မရန မရန မရမ မလန မလန မလန မလန မလန မလမ မသန မသန မဟမ မအန မအန မအန မအပ မအမ မအရ မဥန မ၀တ ယမပ ရကန ရကန ရကန ရကန ရကန ရငန ရစက ရစန ရညန ရတန ရတရ ရန ရနခ ရပသ ရဖန ရဗန ရဘန ရမသ ရသတ ရဥန လကန လကန လကန လခန လခန လပတ လပတ လဘန လမတ လမန လမန လရန လရန လလန လလန လသန လသယ လဟန လ၀န သကတ သကန သခန သဃက သစန သတန သတန သထန သနန သနပ သပက သပန သပန သဖဇ သရခ သရန သလန သ၀တ ဟခန ဟဆန ဟပန ဟပန ဟမလ ဟရဆ ဟသတ ဟသန အဂပ အဂယ အစန အတန အတန အန အဖန အမဇ အမန အမရ အရတ အလန အလန ဥကတ ဥကမ ၀ခမ ၀တန ၀မန ၀မန ၀လန ၀သန (N)
Rainy Season Promotion (မိုးရာသီ Promotion) ခရီးသွားမိဘပြည်သူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် Elite Express မှ ပြေးဆွဲနေသော ခရီးစဉ်အားလုံးအား မိုးရာသီအထူးလျှော့ဈေးအနေဖြင့် (၀၁.၀၆.၂၀၁၉) မှ (၃၀.၀၉.၂၀၁၉) အထိ (၄)လတိုင်တိုင် မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆို လက်မှတ်တစ်စောင်ဝယ်လျှင် Special Discount 10%ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ် Customerများအား သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Elite Express Promotion Page လေးကိုလည်း Like & Share လုပ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါစို့………
Promotion ခရီးစဉ်လက်မှတ်များအား နီးစပ်ရာ ရန်ကုန်/နယ် Eliteဂိတ်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်သာမက Elite Website Page ဖြစ်သော www.eliteexpressmyanmar.com တွင်လည်းဝင်ရောက်လေ့လာပြီး သွားမည့်ခရီးစဉ်အတွက်မဆို MPU payment ဖြင့်လည်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Promotion အတွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း Hot Line: 09977838001/002/ 003/ 150 နှင့် CONTACT US အောက်မှ Elite Stations ကိုနှိပ်၍လည်း Elite Express ရန်ကုန်/နယ်ဂိတ်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
Rainy Season Promotion (မိုးရာသီ Promotion) ခရီးသွားမိဘပြည်သူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် Elite Express မှ ပြေးဆွဲနေသော ခရီးစဉ်အားလုံးအား မိုးရာသီအထူးလျှော့ဈေးအနေဖြင့် (၀၁.၀၆.၂၀၁၉) မှ (၃၀.၀၉.၂၀၁၉) အထိ (၄)လတိုင်တိုင် မည်သည့်ခရီးစဉ်မဆို လက်မှတ်တစ်စောင်ဝယ်လျှင် Special Discount 10% ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်Customerများအား သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ
• Elite Express Promotion Page လေးကိုလည်း Like & Share လုပ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါစို့……….
• Promotion ခရီးစဉ်လက်မှတ်များအား နီးစပ်ရာ ရန်ကုန်/နယ် Eliteဂိတ်များနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံတွင်သာမက Elite Website Page ဖြစ်သော www.eliteexpressmyanmar.com တွင်လည်းဝင်ရောက်လေ့လာပြီး သွားမည့်ခရီးစဉ်အတွက်မဆို MPU payment ဖြင့်လည်း တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Promotion အတွက် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း Hot Line: 09977838001/002/ 003 /150 နှင့် CONTACT US အောက်မှ Elite Stations ကိုနှိပ်၍လည်း Elite Express ရန်ကုန်/နယ်ဂိတ်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ
မကွေးတိုင်းအတွက် Elite Express ရဲ့ နောက်ထပ် သတင်းကောင်း Elite Express ၏ ရန်ကုန် - မကွေး ခရီးစဉ်အား လက်ရှိပြေးဆွဲနေသော အထူးကားများ (Business Class)...
မိုးတွေသည်းလို့ ပို့စရာပစ္စည်းတွေ နောက်ကျမှာ စိတ်မပူနဲ့နော်… Elite Express မှ သင့်...
Yangon ->Naypyitaw(BawGa) Yangon ->TatKone Yangon ->Taunggyi Yangon ->Bagan Yangon ->Pakhuokku ...
We accept with
Copyright © 2019. All Rights Reserved. Elite Express Public Company Limited